Ka amaahashada bangi
(Låna hos bank)
Qofka doonaya inuu iibsado guri wuxuu amaah weyddiisan karaa bangi. Haddaba si loo helo amaah guri lagu iibsado waxaa la isku xiraa in qofku shaqeeyo oo dakhli soo galo iyo in qofku awoodo inuu qayb ka mid ah kharashka guriga bixin karo.
Caymiska guriga iyo hantida gaarka ah
Caymiska gurigu wuxuu isugu jiraa caymisyo kala duwan. Caymiska gurigu wuxuu kabayaa waxyeelada soo gaarta guriga iyo alaabta guriga taal. Waxaana waxyeelooyinka ka mid noqon kara xaditaan, dab ama dhaawac biyo. Waxaa lacag la siinayaa dadka dhaawac soo gaaray ama lagu xukumay in ay magdhaw bixiyaan.
Caymisyo badan oo guryaha waxaa ku jira caymiska safarada. Waxaana lacag la siiyaa qofka isagoo dalka dibeddiisa ku sugan, ay wax ku dhacaan.
Waxaa caymisyo badan oo guryaha ku jira caymiska xagga sharciga. Taas micneheedu waxa weeye in qofka laga bixiyo kharashka qareenka iyo kharashyada kale ee dac’wadda khilaafka ee maxkamadda la hor keeno. Khilaaf waxaa loo la jeedaa kolka laba qof ay wax ku heshiin waayaan, sida furriin. Dac’wadda khilaafku lama mid aha dac’wadda falka dembi.
In caymiska lagu jiraa aad ayey muhiim u tahay, ha la degganaado guri gacankoowaad ah, mid gacanlabaad ah ama mid la leeyahay. Shirkadaha caymiska badankood waxay iibiyaan caymiska guriga.
Qoysaska carruurta haysata iyo dhallinyarada da’doodu gaartay 18 sano welise aan buuxsan 29 sano oo ka diiwaangeshan Iswiidhan waxay ka codsan karaan kaalmo-dhaqaaleedka kirada hay’adda Försäkringskassan.
Inta ay lacagta kaalmo-dhaqaaleedka kiradu noqoneyso waxay ku xiran tahay dakhliga iyo inta qof oo guriga ku nool.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: www.forsakringskassan.se
Warbixintu waxay ku qoran tahay af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.
Amaahada alaabta guriga
Amaahda alaabta guriga waa lacag loo deynsado si loo iibsado qalab guri , maacuun iyo alaabo kale oo guriga la dhigto.
Sharcigani dadka uu khuseeyaa ee ku jira barnaamijka la qabsashada dadka dhawaan wadanka soo gala ee ajinebiga ah qaarkood iyo xafiiska qaabilaada qaxoontiga ee degmadu way ka dalban karaan lacagta deynta ah Guddiga ammuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda CSN, si ay u gataan qalab ay dhigtaan guryahooda.
Waa lagu siinayaa deynta haddii aad u guuraysid guri qalabaysan ama mid aan qalabaysneyn ama aad qeyb ka kiraysanayso guri uu qof kale ku jiro. Deynta waa in la dalbado ugu dambeyn laba sannaddood, marka laga bilaabo maalinta ugu horeysay ee degmo lagugu diiwaangesho.
Marka aad deynta qaadatay kedibna waxaa bilaabmaya bixintii deynta, oo uu la socdo korsaar. Korsaarku waa kharash aad ka bixinayso lacagtii deynta ahayd ee aad amaahatay. Lammaanaha is qaba ama dadka wada deggenni way wada qaadan karaan deyn ay wadaag ku yihiin. Markaas waxay labaduba si siman masuul uga noqonayaan bixinta dulsaarka iyo soo celinta lacagtii deynta ahayd.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: www.csn.se